Tafura 21.3 yakatoburitswa uye inouya nekuchinja kwakasiyana uye kuvandudzwa kune vatyairi | Linux Addicts
Tafura 21.3 yakatoburitswa uye inouya nekuchinja kwakasiyana uye kuvandudzwa kune vanodzora
Darkcrizt | 26/11/2021 08:28 | Yakagadziridzwa ku 26/11/2021 15:30 | Graphics
Mushure memwedzi mina yekukura kuvhurwa kwe kushandiswa kwemahara kweOpenGL neVulkan APIs: Tafura 21.3.0, iyo yakamisikidzwa seyekutanga vhezheni yeMesa 21.3.x bazi rine mamiriro ekuyedza. Mushure mekupedzisira kwekodhi kudzikamiswa, yakagadzikana vhezheni 21.3.1 ichaburitswa.
Mesa 21.3 inopa yakazara OpenGL 4.6 rutsigiro ye965, iris (Intel), radeonsi (AMD), zink uye llvmpipe vatyairi. Tsigiro ye OpenGL 4.5 inowanikwa kune iyo AMD GPU (r600) uye NVIDIA (nvc0), uye OpenGL 4.3 kusvika virgl (virtual GPU Virgil3D yeQEMU / KVM). Vulkan 1.2 rutsigiro inowanikwa kuIntel ne AMD makadhi, pamwe ne emulator modhi (vn) uye lavapipe software rasterizer, Vulkan 1.1 tsigiro inowanikwa yeQualcomm GPU uye lavapipe software rasterizer, uye Vulkan 1.0 inowanikwa Broadcom VideoCore VI GPU (Raspberry Pi. 4).
1 Zvinyorwa zvitsva zveTafura 21.3.0
Zvinyorwa zvitsva zveTafura 21.3.0
Muiyi vhezheni nyowani yeMesa inoratidzwa, zvinoratidzwa izvozvo mutungamiriri weZink (kuitwa kweOpenGL API pamusoro peVulkan, iyo inokutendera iwe kuti uwane hardware-inomhanyisa OpenGL kana system yako iine madhiraivha mashoma kutsigira Vulkan API chete) inoenderana neOpenGL ES 3.2.
Nepo controller pafrost, yakagadzirirwa kushanda neGPUs yakavakirwa paMidgard (Mali-T6xx, Mali-T7xx, Mali-T8xx) uye Bifrost (Mali G3x, G5x, G7x) microarchitectures, inosimbiswa zviri pamutemo kuti ienderane neOpenGL ES 3.1.
Ukuwo, mutyairi wev3dv yakagadzirirwa iyo VideoCore VI graphics accelerator inoshandiswa kubva kuRaspberry Pi 4 modhi Yakatenderwa kutsigira Vulkan 1.1 Graphics API uye yakawedzerawo rutsigiro rwe geometry shaders. Kuita kwekodhi yakagadzirwa ne shader compiler yakagadziridzwa zvakanyanya, iyo ine mhedzisiro yakanaka pakumhanya kwezvirongwa zviri kushingaira kushandisa shaders, semuenzaniso, mitambo yakavakirwa pane Unreal Engine 4.
Mutungamiriri RADV Vulkan (AMD) inowedzera tsigiro yekuyedza yekutevera ray uye ray-traced shaders. Kune makadhi eGFX10.3, kusarudzwa kwepakutanga kunogoneswa nekusarudzika uchishandisa NGG (Next Generation Geometry) shading injini.
Izvo zvakare zvinoratidzika kuti mutongi welavapipe nekushandiswa kwesoftware rasterizer yeVulkan API (yakafanana nellvmpipe, asi yeVulkan, iyo inoturikira mafoni kubva kuVulkan API kuenda kuGallium API) ine rutsigiro rweanisotropic mameseji kusefa uye yakawedzera rutsigiro rweVulkan 1.2.
Mutungamiriri OpenGL llvmpipe, mumweyakawedzera rutsigiro rweFP16 mashandiro, anisotropic mameseji kusefa (GL_ARB_texture_filter_anisotropic) uye akapiniwa ndangariro nzvimbo (GL_AMD_pinned_memory). Tsigiro yakapihwa iyo OpenGL 4.5 inoenderana mbiri.
Iyo OpenGL Iris mutyairi (mutyairi mutsva weIntel GPUs) akawedzera multithreaded shader kuunganidza kugona uye iyo VA-API (Vhidhiyo Kuwedzera API) chimiro tracker inopa rutsigiro rwekumhanyisa AV1 vhidhiyo encoding uye decoding paunenge uchishandisa AMD GPU madhiraivha.
Zvinotaurwawo kuti EGL tsigiro inoitwa yeWindows platform uye izvo yakawedzera rutsigiro rweEGL_EXT_present_opaque yekuwedzera yeWayland, kunze kwaizvozvo dzakagadziriswa nyaya nekuratidzira kujeka mumitambo inomhanya munzvimbo dzakavakirwa paWayland protocol.
Nezve Vulkan RADV (AMD), ANV (Intel) uye vatyairi velavapipe, rutsigiro rwekuwedzera rwakawedzerwa:
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo Nezve iyi vhezheni nyowani yevatungamiriri veMesa 21.1.0, unogona kutarisa iyo ruzivo mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » Tafura 21.3 yakatoburitswa uye inouya nekuchinja kwakasiyana uye kuvandudzwa kune vanodzora
CentOS 8.5 yakatoburitswa uye iyi ndiyo yazvino vhezheni ye8.x yakatevedzana inopa nzira kuCentOS Stream.